Pogba Oo United Ku Hogaamiyay Finalka Europa League, Ac Milan Ayay Ka Talaabsadeen – Kooxda.com
HomeEuropa LeaguePogba Oo United Ku Hogaamiyay Finalka Europa League, Ac Milan Ayay Ka Talaabsadeen
Pogba Oo United Ku Hogaamiyay Finalka Europa League, Ac Milan Ayay Ka Talaabsadeen
March 19, 2021 Osman Fantastic Europa League, Wararka Maanta 0
Man United ayaa iska xaadirisay wareegga 8-da ee tartanka Europa League ka dib markii ay guul ka gaareen Ac Milan oo ay labadii is arag ay ku garaaceen
Sheekada labada qeyb: Labada koox ayaa qeybta hore soo bandhigay ciyaar heerkooda isu dhawaa mana jirirn halis gilin muuqata oon ay isku sameeyeen marka laga yimaado hal fursad oo xaqiiq aheyd oo Milan laga bad baadiyay dhamaadkii ciyaarta
Labada koox waxa ay soo ciyaareen kubad deg degsiimo leh mana jirrin koox si gaar ah kubadda cagta ugu haysayay xilli ay ka sheegteen go`aano ay si deg deg ah u qaadanayeen .
Qeybta hore , labada koox waa ay u furneyd waxa uuna dagaalka ka taagnaa garbaha xilli ugu dambeyn ay ku nasteen bar bar dhacaas min halka gool ah.
Qeybta labaasd , United dar dar ayay ku bilaabeen waxa ayna durba keeneen gool uu dhaliyay Pogba oo badel ku soo galay soo laabashadii xilligaas oo Rashford loo saaray waxa uuna goolka cajiibka ah dhaliyay daqiiqaqdi 49-aad
Ka dib goolkaas United iyaga ayaa kubadda ku badnaa waxa ayna Milan kaliya ku jireen in ay iska soo bixiyaan waa ayna u nuglaayeen gool labaad marka la eego heerka United ay ku soo muqatay qeybta labaad.
Milan waxaa ku adkaa in kubadda gaarsiiiyaan aagga United maadaama kooxda Ole Gunner ku wacnaayeen in sax ah kubadda uga kala jaraan kooxda ka socota Italy kuwaasi oo daqiiqadii 65-aad badal ku soo gilyay Zalatan iyo Diogo Dalot waxa ayna aheyd xilli ka dib la arkayay Milan oo afka hore United gaareysay .
Daqiiqadii 73-aad goolhayaha United ayaa kubad gool aheyd oo madaxa aheyd waxa uu ka bad baadiyay Zlatan waxaana muuqaneysay in Milan u dhawaanayeen goolka bar bar dhaca.
Ka dib markii Zlatan uu soo galay United dib ayay u gurteen xilli Milan sahal u aheyd in kubada afka hore gaarsiiyaan xilli ay dagaal ugu jireen goolka bar bar dhaca balse ugu dambeyn waxa ciyaarta ku dhamaatay halkaas gool xilli labadii is arag ay natiijada isku noqotay 2/1
Waa Maxay Sababtii Ay Barcelona Uga Naxday Ka Hadhistii Atletico Madrid Ee Champions League, Faa’oodo Ayay Ku Qabtay.
Kooxaha Sida Rasmiga Ah Isaga Xaadiriyay 8 Dhamaadka Europa League.